Iyo iPhone 13 icharamba iine notch uye ichave 0,26 mm mukobvu | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | iPhone, Noticias
2021 yatanga nekudonha kwakabatana nemazhinji makuru maapuro zvigadzirwa. Imwe yemidziyo yenyeredzi yegore rega ndeye iPhone. Maonero acho anogara achigadzwa munaGunyana, mwedzi wakasarudzwa neApple kuvhura zvizvarwa zvitsva zveayo smartphone inotengesa pasi rese. Rwazvino ruzivo kubva kuJapan blog inofungidzira izvo iPhone 13 icharamba iine notch kunyange zvishoma zvishoma. Uye zvakare, inofanirwa kuwedzerwa iyo Ese mana mamodheru anozove ari mukobvu zvishoma achienzaniswa neiyo iPhone 12. Kune rimwe divi, iyo yekumashure makamera haigamuchire makuru kuvandudza nekuti ivo vanochengeta malenzi.
Ngatiregei kuisa tarisiro yakakwira yeiyo iPhone 13: zvishoma notch uye hwakawanda hukobvu
Iye munhu anotarisira kuburitsa ibhuku reJapan MacOtakara, iyo yanga ichifanotaura nezveramangwana remidziyo yakasiyana muiyo Big Apple kwemazuva akati wandei. Nhasi yave nguva yeiyo Iphone 13. Ichi chishandiso chitsva chichauya munaGunyana 2021 mu mana mana emhando dzazvino: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro uye 13 Pro Max. Isu ticha taura pane akanyanya kuongororwa nhau pazasi. Nekudaro, pfupiso yemushumo ndeyekuti isu hatitarisiri shanduko huru sezvo isu tanga tichinzwa mumwedzi ichangopfuura yeiyo iPhone 13.
Kutanga, iPhone 13 saizi haizosiyana. Ivo vacharamba vari iwo akafanana mamodheru, aine iwo akafanana saizi kunze kweiyo a ukobvu kuwedzera kweangori 0.26mm. Tikaramba tichienda kumberi, tichazviona notch ichiripo asi nehukuru hwakati wandei padiki pane iyo iPhone 11 ne12 sezvo zvaizogona kutamisa mamwe ma sensors eChokwadi Kudzika kwakaomarara. Izvi zvinogona kudzikisira saizi ye notch yakatanga kuoneka pane iyo iPhone X.
Kune rumwe rutivi, makamera ese ekumashure anochengeta saizi yakafanana uye malensi akafanana Sezvazvichazoitika neiyo nyowani iPad Pro. Pamusoro pezvo, zvinoita sekunge iyo iPhone 13 Pro uye Pro Max vane yakaoma yemakamuri akafanana kumashure kuti iyo iPhone 13 Pro igamuchire zvakafanana kugadzikana kwekusimudzira uye 2.5x Optical zoom iyo yakangogamuchira iyo iPhone 12 Pro Max munaGunyana apfuura.
Zvinoita sekunge isu tichafanirwa kumirira iyo iPhone 14 kuti ive ne iPhone isina notch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iPhone 13 icharamba iine notch uye ichave iri 0,26 mm mukobvu